Mareykanka oo dad Shacab ah ku Xasuuqay duqeyn uu ka geystay deegaanka – Kismaayo24 News Agency
Mareykanka oo dad Shacab ah ku Xasuuqay duqeyn uu ka geystay deegaanka
by admin 30th December 2019 0156
Taliska Ciidamada Mareykanka ee Africa ayaa war saxaafadeed ka soo saaray duqeyn ay shalay ka fuliyeen deegaano ka tirsan Gobolka Shabeellaha Hoose, kaasoo ay ku dileen saraakiil ka tirsan Al-Shabaab.
Duqeyntan ayaa ka kala dhacday deegaanka Kuunyo Barrow iyo Caliyow Barrow oo ka tirsan Shabeellaha Hoose, iyadoo lagu dilay illaa afar dagaalame ka tirsan Al-Shabaab oo la sheegay inay saraakiil sare ku jiraan.
War saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in saddex duqeyn oo ay labo goobood ka fuliyeen ay ku burburiyeen labo gaari, waxaana labo ka mid ah duqeynta ka dhacday Kuunyo Barrow, halka duqeynta 3aad ay ka dhacday Tuulada Caliyow Barrow.
Duqeymahan ayaa yimid maalin kaddib qarax weyn oo dad badan ku dhinteen oo ka dhacay Ex Koontarool Afgooye ee magaalada Muqdisho, inkastoo mas’uuliyadda qaraxaas aanay sheegan Al-Shabaab, hadana waxaa la sheegayaa in ficilka iyo calaamadaha qaraxyadaas ay yihiin kuwii Al-Shabaab soo abaabuli jirtay.
Dalka Qatar oo diyaarad sida gargaar caafimaad u soo dirtay Muqdisho.
Aqalka Sare oo ka doodaya hindise sharciyeedka wax ka badalka xeerka Saxaafada
Top News: Wasiirka Gaashandhiga Gen. Diini oo runta indhaha ka saarey Madaxda Sare ee dalka.
Madaxweyne Lafta Gareen oo sheegay in Abuu Mansuur uusan Xirneyn
DEG DEG:+Sawirro Boqor Cabdullahi Geedi Shadoor iyo wafti uu hoggaaminayo oo reer Ceeldheer iyo Mareeg ah oo gaaray dhuusamareeb